နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: မျှော်လင့်ဆဲ မျှော်နေလျက် မျှော်လင့်ရင်းရူး
ပျံ့လွင့်လာသော နှလုံးသားမှ ရင်တွင်းဖွဲ့သံစဉ်များ
မျှော်လင့်ဆဲ မျှော်နေလျက် မျှော်လင့်ရင်းရူး
နွေ မိုး ဆောင်းတွေ
ရက် လ နှစ်တို့ တိုက်စားရာ
ကိုယ့်ဘ၀ဟာ နွေနေပမာ ပူပြင်းလို့
သြော် ....တဖက်သတ် အဖြစ်ဟာ
သေရာပါမဲ့ အချစ်ပါလား ခင် .......
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 6:44 AM
Labels: ရင်တွင်းဖြစ် ကဗျာများ
သူကြီးမင်း February 21, 2013 at 7:30 AM
နှလုံးသားတောင်ထိပ်က အလွမ်းမိုးရိပ်တွေပါ ခင်။
မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)ရဲ့ ၀တ္ထုလေး သွားအမှတ်ရမိတယ်။
တစ်ဘက်သတ်အဖြစ်ဟာ သေရာပါမဲ့ အချစ်ပါလား ခင် တဲ့။
တစ်ဘက်သတ်မဟုတ်တဲ့ အချစ်(ဇနီးမောင်နှံအချစ်)ကျတော့ သေရာမပါမှာ ကျနေတာဘဲ။
အားလုံး သေရာပါတွေချည်းဘဲကို။ ဟာ ဟ။
မျှော်လင့်ရင်း ရူး။ ဆိုတော့ အခုထက်ထိ ရူးနေဦးမဲ့ပုံဘဲ။ မြန်မြန်လစ်မှ။း)
witch83 February 21, 2013 at 9:25 PM
wowww...အသစ်ကလေးပါ ဘား ... :)))
"မျှော်လင့်ရခြင်း"ဆိုတာကို သိသူမို့ ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ခံစားသွားပါတယ် sis ရေ..
ရင်ခုန်ရသူ February 22, 2013 at 1:00 AM
ရိုးမြေကျ February 22, 2013 at 1:33 AM
ဖတ်နေရင်းနဲ့ အစ်မတောင်ခံစားမိပြီး ရင်တွေပူလာတယ်။
ညလေးနဲ့လဲ ဖေ့ဘုတ်မှာ တစ်ခါမှကိုဆုံရသေးဘူးဟယ်
roseayemaung February 22, 2013 at 2:48 AM
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) February 22, 2013 at 4:30 AM
နှစ်ဘက်သက်အချစ်ကတော့ ဘယ်လိုနေတယ် မသိရသေးဘူးဗျ
ဟိုအပေါ်ဆုံးက သူကြီးမင်းကို သွားမေးရဦးမယ်း))။
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 22, 2013 at 4:50 AM
ဟွန်းးးးးးးးး အဲ့သူကြီးမင်းဆိုတဲ့ လူပျိုကြီးကလဲ တစ်မှောက် ....
ပြပြလာတယ်....မကြာခဏ ဟီးးးးးးးးးးးးး :)))
ဟုတ် ...အမ witch83
အမ ပြောနေလို့ ခုရေးပြီးခုတင်လိုက်တာ...
အဲ့ ပုံစံမျိုးတော့ တစ်ခါမှ မရေးဖူးပါဘူး မ ရယ်....:)
သိနေဒယ်လေ သိနေဒယ်.....ရှင့်စာပြောင်ကို ဖတ်ချင်လို့ကို
ဟုတ်ပါဝူးးးးးးးးးး ဒီအတိုင်းပဲ စိတ်ထဲရှိတာရေးလိုက်တယ်
ဟုတ်တယ် မ ရေ....ဘာဖြစ်နေတာလဲကို တိဝူးးးးးးးးးးးးးး :(((
ငိုတော့ မငိုလိုက်ပါနဲ့ ရို့စ်ရယ်.....:)))
ဟုတ်တယ် အကိုမင်းဧရာရေ....အဲ့လူကြီးကိုသာ သွားမေးးးးးးးးးးးးးး
သူက အဲဒိကိစ္စတွေ သိပ်ကျွမ်းပုံရတယ် ဟိ :)
လောင်စာ February 22, 2013 at 6:53 AM
အလည်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကံကောင်းပါတယ်။ လွမ်းရတာလည်းကောင်းတယ်၊ လွမ်းစရာမရှိသူထက်စာရင်။ မလွမ်းရတာလဲကောင်းတယ်။ မျှော်ရတာလဲ ကောင်းတယ်။ မျှော်စရာမရှိသူထက်စာရင်။ မမျှော်ရလည်းကောင်းတယ်။
Candy February 22, 2013 at 7:36 AM
ကဗျာလေးကောင်းတယ် (as always :D)
ဘုန်းတောက် February 22, 2013 at 9:34 AM
ဟုတ်ပါ့ တစ်ဖက်သတ်ကြီး မောတယ် ဟူး...(မှတ်ချက် နှစ်ဖက်သတ်ဆို သိပ်မမောဘူး)
မိုးညချမ်း February 22, 2013 at 10:23 AM
ချစ်မရေ ညလေးရင်ထဲကိုများ လှမ်းမြင်လို့ ဒီကဗျာလေးကိုရေးသလားကွယ် ... တစ်ဖက်သတ်ကကောင်းဘူးနော် ;)
Sweety Snow February 22, 2013 at 11:37 AM
မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ရေးသလို ကဗျာပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ ပိုကြိုက်တယ်..။ မိုးနတ် ရေးတာတွေ အရမ်းကောင်းလာတယ်နော်. ။ အထူးသဖြင့် ကဗျာရေးတာလေးတွေ တကယ်သဘောကျတယ်.. ကာရံလေးတွေလည်းပါတယ်.. အဖွဲ့အနွဲ့လည်းပါတယ် မိုက်စ် (y) (Y)
မိုးငွေ့........ February 22, 2013 at 10:15 PM
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 23, 2013 at 6:25 AM
သိပ်မှန်တာပေါ့ လောင်စာရယ် :P
ကျေးကျေးပါ ကန်ရေ :D
အာ့ဆိုရင်တော့ ဒဂျီးမင်းနဲ့ တဂိုဏ်းထဲပဲထင်တယ်..ဟယ်
ဘုန်းတောက်ကို ဘာတွေလျှောက်ပြောနေမိပြီလဲ မသိ
ကန်တော့ ကန်တော့ပါ ဘုရားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
စနိုးရေ....တကယ်ပဲ ဆရာမောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ရေးဟန်နဲ့ဆင်သွားသလားးးးးးးးးးး
မိုးနတ်ရေးတာလေးတွေ ကောင်းလာတယ်...စနိုးလဲနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ အတိုင်းမသိ
၀မ်းမြောက်မိရသလို ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်နော် အာဘွားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဟုတ်လား မကြီးမိုးငွေ့ :)))
HNL February 23, 2013 at 10:16 AM
အမလည်း အဲ့ဒါ သိချင်နေတာ...:)
မင်းအရိပ် February 23, 2013 at 3:43 PM
တစ်ဖက်သတ်ဆိုတာ အချစ်စတင်မွေးဖွားကတည်းက တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်လာလိုက်တာ ဘယ်တော့မှ နှစ်ဖက်သတ်မဖြစ်တော့ဘူးဗျ
နှစ်ဖက်သတ်ဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားရမယ်ထင်တယ် :P
မောင်ဘုန်း February 24, 2013 at 4:59 AM
ခင် .... ရေ .... တစ်ချက်လောက်တော့ ကြည့်သင့် ပါတယ်ကွယ် ...... :D
မိုးနတ်ရေ .... ကဗျာ ကာရံလေးတော့ အရမ်းကြိုက် ဗျာ .... ။
အိမ်မက်စေရာ February 24, 2013 at 2:51 PM
ကဗျာလေး ကောင်းတယ် ခင်ရယ်..း)
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ကာရံလေးတွေလဲ လှတယ်.
ခင့် အတွက်ပြီးရင် ခိုင့် အတွက်ရော ရေးပေးမလား..ပြော
ရိုးမြေကျ February 24, 2013 at 10:15 PM
မိုးနတ်လိပ်စာအတိအကျပေး။ ဂျူးရဲ့ ချစ်သူလားစကားတစ်ပွင့်ပွင့်ခဲ့တယ်ကို မိုးနတ်ဖို့ မမပို့ပေးမယ်။
yoemyaykya18@gmail.com ကို ပို့လိုက် လိပ်စာ။သိလား။ အားနာစရာမလိုဘူးညလေး။ အားနာရင်မခေါ်ဘူး။
သက်ဆု February 25, 2013 at 2:29 AM
ကဗျာလေးရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုတွေ့မိထဲက စိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါ..
စံပယ်ချို February 25, 2013 at 3:50 AM
ရက် လ နှစ်တို့ တိုက်စားရာ-------
ဆရာမောင်စိန်ဝင်း ကဗျာအတိုင်းပဲ ရင်ထဲထိတော့တာပဲနော်
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 25, 2013 at 7:27 AM
အမ(နှင်းနုလွင်) လဲ သိချင်တယ်လားးးးးး
မိုးနတ် ပြောပြနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော် :)))
မခံစားရချင်ရင်တော့ မင်း ပြောသလို
နှစ်ဖက်သတ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပေါ့ မင်း ရ :P
အကို့ ကောင်းကင်ဖြူက ချောတယ်နော်...
နာ့ အကိုဘုန်းရဲ ခန့်ပါတယ် ခန့်ချောကြီးးးးးးးးးးးးး :P
အို ခိုင်ကရေးစေချင်တယ်ဆို ရေးပေးမှာပေါ့ ခိုင်ရဲ့ :) (အိမ်မက်စေရာ)
ဟမ်...အားနာရင် ခေါ်ဘူးဆိုတော့ အခက်သားးးးးးးးးး
ဒီမှာ ညလေးက အားနာလို့ ငြင်းမလို့လုပ်နေတာ...
နေပါစေ မ ရယ်...အလကား ဒုက္ခရှာလို့ကွယ် :P (မမရိုးမြေကျ)
သက်ဆုရေ...ဘူမှန်းမသိပေမဲ့ ကဗျာလေး လာအားပေးလို့
ကဗျာတွေ သိပ်ကြိုက်ပေမဲ့ သိပ်မဖတ်ရဘူးးးးးးးးးးးးးးးး အာ့ကြောင့်
သူ့ရေးဟန်ကို စုံစုံစေ့စေ့မသိပါဘူးရှင်...ဒါပေသိ ဒီကဗျာဖတ်ပြီးသူ
တိုင်းက ဆရာ့ကဗျာအတိုင်းပဲလို့ ပြောကြတော့ မိုးနတ်မှာ ၀မ်းပဲသာ
ရမလား ၀မ်းပဲနဲရမလားဖြစ်နေတယ်.....ဆရာ့ ကဗျာနဲ့ တူတယ်
ဆိုလို့ အရမ်းဝမ်းသာမိတယ်...ရေးဟန်ဆင်တယ်ဆိုလို့ အတုခိုးပြီး
ရေးတယ်လို့ထင်မှာလဲ စိုးတယ်...အမှန်က ဆရာ့ကဗျာတွေဟာ
တချို့တစ်ပုဒ်တလေက လွဲရင် မိုးနတ်အတွက် တော်တော်များများက
မြဝတီဇော် February 25, 2013 at 9:00 PM
ညီမလေး မိုးနတ်ရေ...မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ တစ်ခါတလေ ရှိကောင်းပေမဲ့ တစ်ခါတလေကျရင်လည်း အဲဒီ မျှော်လင့်ချက်ကြောင့်ပဲ ရူးသွပ်နေအောင် ခံစားရတတ်တယ်နော်။ မိုးနတ်ရဲ့ ကဗျာလေးထဲက
" ...အခါတရာမက ကိုယ်
ဒီနေရာလေး ကြိုက်တယ်။ ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော်။ :)
ညအက္ခရာ February 25, 2013 at 10:57 PM
အသဲလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ် February 28, 2013 at 6:50 AM
လရိပ်အိမ် March 1, 2013 at 6:35 AM
အခုတော့ မျှော်လင့်မှုတွေ သိပ်မထားချင်တော့ဘူး။
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 1, 2013 at 6:36 AM
တခါတခါ အဲလို ကိုယ်ထင်လာပြပေးတာ
ကျေးဇူးပါနော် မ :))) တကယ်ပြောနေတာပါ
ဘာဖြစ်တာလဲ မသိ ( ညအက္ခရာ )
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါဟယ် သယ်ရင်းးးးးးးးးးးး (အသဲလေး)
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 1, 2013 at 6:38 AM
ဟင် အမလရိပ် (လရိပ်အိမ်)
မငိုနဲ့တော့နော် တိတ် တိတ် :)))
အလွမ်းမြို့ March 20, 2013 at 12:59 PM
ကဗျာလေးဖတ်ပြီး အန်တီမာမာအေးရဲ့ သီချင်းလေးတွေ သွားသတိရမိတယ်။အဟဲ
လရိပ်အိမ်က အသဲကွဲတာမဟုတ်ဘူး။။ အကွဲသဲတာပါ...
အောင်ရင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သွားသတိရမိတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းက မကြီးတို့ဆိုခဲ့တာလေ။
အချစ်နဲ့စစ်မှာ မတရားဘူးရှိသော်လည်းလေ စိတ်မဆိုးလိုက်ပါနဲ့ သူငယ်ချင်းရယ်ဆိုတဲ့
ချိုပေါ့ကျ သီချင်းလေးက လရိပ်အိမ် အတွက်ပါဘဲ။
အောင်မြင်မှုဟာ စိတ်ရဲ့အစာလို့ ဆိုခဲ့ရင် ကိုယ်ဝါသနာပါရာ တတ်မြောက်တဲ့ အနုပညာဟာ နှလုံးသားရဲ့ အာဟာရပဲ .... ကိုယ်ကတော့ စိတ်ရဲ့အစာကိုလဲ ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်တင်းချင်တယ်.. နှလုံးသားရဲ့ အာဟာရကိုလဲ လုံလောက်စွာ စားသုံးချင်တယ် .....
မမရိုးမြေကျအတွက် အမှတ်တရ မွေးနေ့ကဗျာ ( ၁၈.၂.၂၀၁၃ )...
မမလရိပ်အတွက် မွေးနေ့အမှတ်တရ ကဗျာ
“မ” ကဗျာများ (3)
ကိုယ်ပိုင်ခံစားမှု ရသစာစုလေးများ (2)
ရင်တွင်းဖြစ် ကဗျာများ (36)
ရင်တွင်းဖြစ် အချစ်ကဗျာများ (15)
အိမ်လေးရဲ့ အမှတ်တရ (ရောက်တတ်ရာရာ ၀န်ခံချက်များ) (2)
ဖေဖေသူ့ အတွက်ရေးတဲ့ ကဗျာ (1)
မောင် အမှတ်တရ ကဗျာများ (1)
ခင်တယ်ဆိုရင် Followers လေးလုပ်သွားပေးပါနော်
သူ့ အသားလေးက ညိုညိုစိမ့်စိမ့် တသိမ့်သိမ့် ရင်တုန်အောင် ခုန်ခဲ့မိပါတယ်....... သူ့စကားလေးက ချိုချို ငြိမ့်ငြိမ့် ခေါင်းညိမ့်ကာ ငါလေ...
ငှက်ကလေး သို့ ......
ငှက်ကလေးရေ ..... အသံသာတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ငှက်ကလေးရေ ..... အိပ်မောကျနေပြီလားကွယ် ..... ကောင်းသောညလေး ဖြစ်ပါစေလို့ ငှက်ကလေးအတွက် ကိုယ်ဆန္ဒပြုမ...
မသိခြင်း = အချစ်
မမျှော်လင့်ပဲ မင်းရောက်လာတယ်....... ရုတ်တရက်မို့ ငါမတားဆီးလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးကွယ်...... ၀ုန်းဒိုင်းကျဲပြီး ၀င်မွှေသွားတယ်....... ငါ့ရင်ဘတ်တ...
မောင် မသိပဲ မောင်လို့ နာမ်စားလေး ခေါ်မိတဲ့အတွက် စိတ်ဆိုးချင်လဲ စိတ်ဆိုးတော့ မောင် မောင့်ကို မောင်လို့ ခေါ်ခွင့်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်ဟ...
တိတ်ဆိတ်တဲ့ ညအမှောင်...... လရောင်မှ မလင်းနိုင်တဲ့ ဒီခရီး။ အချစ်မီး ထွန်းလင်းခဲ့သူ မင်းကြောင့်သာ.... ပင်လယ်ကို မြင်နိုင်တော့တယ်။ ...
ကြယ်စင်တွေ ဖြန့်ကျဲ......... အဆုံးအစမရှိတဲ့ ကောင်းကင်ရင်ဘတ်ထဲ..... အပြာရောင်ဂြိုလ်တစ်ခု......... တည်ဆောက်နေခဲ့တယ်........။ မင်းတစ...
ချစ်သူ.... သတိရမိမှာစိုးလို့ မေ့ပစ်ဖို့... ကြိုးစားမိကာမှပဲ မင်းကိုသတိရစေမဲ့.. အကြောင်းအရာတွေက တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ ငါ့ရဲ့ရှေ့မှာ ဖြစ...
မြင်လှည့်ပါ သခင် ကြင်ခဲ့တာ ရာဇ၀င်မှာ စာတင်လောက်တဲ့ အချစ်မျိုး ..... ဒါကို.... နှင်ရက်စရာ ထင် သူမကြင် ဘယ်လိုပင် တမင...
ရင်ထဲက လမင်း ( သို့မဟုတ် ) အားလုံးချစ်တဲ့ ကိုစိုးသူ
သူ ..... သူဟာ သူသိပ်ချစ်တဲ့ အမိမြေကို စေတနာ မေတ္တာ အကြင်နာတွေ ရင်ဝယ်ပိုက်လို့ ပြန်လာခဲ့တဲ့သူ ...... သူဟာ ကောင်းကင်ပေါ်က စေလွှတ...
အရင်လိုပါပဲ...... ထင်းရှုးတောရိပ်တွေနဲ့ ချယ်ရီပင်ညို့ညို့တွေကြား... နင်ဖြတ်သွားနေကျ လမ်းကျဉ်းလေးတစ်လျှောက် ရင်ခုန်စွာနဲ့ ငါနင့်ကို ...
Moi Special One !
ငှက်ဖျားဆေးက သွေးကင်ဆာကိုပျောက်စေသလား ?
Rice Cooker Ribs and RiceSource
အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ကုန်သွယ်မှုအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်သည့် Myanmar Trade Portal နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း ကြော်ငြာ
တရုတ်ဈေးကွက်မှာ သုံးမိနစ်အတွင်း ရောင်းကုန်ခဲ့တဲ့ Xiaomi Mi Note
ကျွန်တော် ရောက်လေရာ မြန်မာအသိုက်အဝန်းမှာ သုံလေ့သုံးထရှိတဲ့ ' ကမ္ဘာကြီး' ဆိုတဲ့ စကားလုံးအားလည်း ကျေးဇူးက တင်ချင်ပါသေးတယ်
kaung kin htet
ကောင်းကင် online မဂ္ဂဇင်း